Cele News Archives - WordPress Blog
ပါးတွေချည်းပဲ အချက် ၂၀ လောက် ချခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင်
ပါးတွေချည်းပဲ အချက် ၂၀ လောက် ချခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင် ပါးတွေချည်း ပဲအချက်၂၀လောက် ရိုက်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ် အကြောင်း ကိုပြောပြလာ ခဲ့သော သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင် သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ပြင် လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ အတူနဲ့ ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင် ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာရရှိ ထားပါ တယ်နော်။ အခု တစ်ခါမှာ ဆိုရင် သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင်က ပါးတွေချည်း အချက်၂၀လောက် ရိုက် ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်အကြောင်း ကိုအခု လိုပြောပြ လာခဲ့ပါတယ်နော် ။သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင် ကဒီကား ရိုက်ကူးရေးကတော့ အမှတ် တရပါဘဲ၊ ပါးတွေကိုရဲတက်သွား […]
အောင်ပွဲတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူတွေ လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်
အောင်ပွဲတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူတွေ လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် ပရိသတ်ကြီးရေ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် အဖြစ် အနုပညာလောကမှာ နေရာ တစ်နေရာရ ရှိထားတဲ့သူကတော့ ကိုပေါက် ပဲဖြစ် ပါတယ်။ သူကတော့ အကြမ်း အနုကာ ရိုက်တာပေါင်းစုံ ကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့ ဝါရင့် အနုပညာရှင် တစ်ဦးပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် အဖြစ် လူသိများ တဲ့အပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ကို ဖန်တီး သရုပ်ဖော်တဲ့ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးအနေနဲ့လဲ အနု ပညာလောကမှာ နာမည်ကြီးကျော်ကြား ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် ဟာ ပြည်သူတွေဘက်ကနေ မားမား မတ်မတ်ရပ်တည် ခဲ့တဲ့ […]
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပေမယ့် လက်ရှိသူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပြသလိုက်တဲ့ အချစ်တော်ဖွေးစိန်လေး…
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပေမယ့် လက်ရှိသူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပြသလိုက်တဲ့ အချစ်တော်ဖွေးစိန်လေး… ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေး ဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက်ပါ ။ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးထားပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး တစ်လက်လဲ ဖြစ်ပါ တယ်နော် ။မိုးကုတ် သူလေးဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေး ဟာ ဇာတ်ကား တိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ကာရိုက်တာ တိုင်းကို အကောင်းမွန်ဆုံးသရုပ်ဖော် တင်ဆက်နိုင် တာကြောင့် အကယ် ဒမီဆုတွေ ကို ထိုက်ထိုက် တန်တန် ဆွတ်ခူးထားပါသေး တယ် ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခု လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ မှာလဲ ပြည် သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ခဲ့ တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုကြ ရပြန်ပါ တယ်။မင်းသမီး ဖွေးဖွေး […]
ချမ်းမင်းရဲထွဋ် အနားကို အတင်းကပ်ပြီး အသည်းယား စရာကောင်းတဲ့ အမူ အရာလေးတွေ လုပ်ပြေ နတဲ့ ယွန်းယွန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ချမ်းမင်းရဲထွဋ် အနားကို အတင်းကပ်ပြီး အသည်းယား စရာကောင်းတဲ့ အမူ အရာလေးတွေ လုပ်ပြေ နတဲ့ ယွန်းယွန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် ယွန်းယွန်း ဆိုတာနဲ့ ပရိသတ်တွေ ချစ်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ကလေး သရုပ်ဆောင် ဘဝကနေ ခုချိန်ထိ အားပေးမှုတွေ ရထားတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အသက် ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရထား တာပါ။ သူမဟာ လူမှုကွန်ရ က်ကနေပုံ ရိပ်လေးတွေ ကိုတင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းတွေ ကသူမရဲ့လူမှုရေး ကိစ္စေ တွကြောင့်ဝေ ဖန်ခံ ရပြီးပျောက် ကွယ်နေ တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုမှာတော့ ပရိ သတ်ရှေ့ကိုပြန်လ ည်ရောက် ရှိပြီး ပုံရိ ပ်လေးတွေ ကိုတွေ့နေရတာပါ။ သူမဟာ ဇာတ်လမ်း […]
ပထမဆုံး စုံတွဲ Art မို့ ဇောကပ် သွားတဲ့ အောင်ရဲလင်း အကြမ်းစား(ရုပ်သံ)
ပထမဆုံး စုံတွဲ Art မို့ ဇောကပ် သွားတဲ့ အောင်ရဲလင်း အကြမ်းစား(ရုပ်သံ) ဘယ်လောက် ကြမ်းလဲ ဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့် လိုက်တော့ လုံးဝ အလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန် ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ် တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့်လိုက်တော့ လုံးဝအလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန်ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း ဘယ်လောက် ကြမ်းလဲ ဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့် လိုက်တော့ လုံးဝ အလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန် ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ် တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း […]
သူမတို့ မိသားစုရဲ့ ကောလဟာလတွေကို ပညာသားပါပါ ဗီဒီယိုလေး တစ်ပုဒ်နဲ့ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်….
သူမတို့ မိသားစုရဲ့ ကောလဟာလတွေကို ပညာသားပါပါ ဗီဒီယိုလေး တစ်ပုဒ်နဲ့ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်…. ပြည်သူချစ်ဝါရင့် အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ သက်မွန်မြင့် ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး အနုပညာလမ်းကို ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်ဟာ ကြင်နာယုယ တဲ့ ခင်ပွန်းသယ်နဲ့ အတူ သားသမီးတွေကို မွေးဖွားထားသော်လည်း အရွယ်တင်နုပျိုပြီး လှသွေးကြွယ်နေတာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားပေးထောက်ခံမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားသူလေးတစ်ဦး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း အချိုးစား ညီမျှနေပြီး အရပ်အမောင်းကလည်း ယောက်ျားလေးတွေကပါ အားကျရလောက်အောင် နိုင်ငံခြားသူလေး တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားပေးထောက်ခံမှု ရရှိထားတာ ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဆယ်စုနှစ်တစ်စု အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သက်မွန်ဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တွေကို […]
ဖမ်းခံရတာ ချင်းတူပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ဝန်းရံခြင်း ကိုမခံ ရတဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဆင်မ
ဖမ်းခံရတာ ချင်းတူပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ဝန်းရံခြင်း ကိုမခံ ရတဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဆင်မ ပရိသတ် ကြီးရေ ပြည်သူ့ အချစ်‌တော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဆင်မ ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ လ ကတည်းက ပြည် သူတွေနဲ့ အတူတူ ဒီမိုကရေ စီတိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည် သူတွေနဲ့ အမှန်တရား ဘက်ကနေ တွေဝေ မနေဘဲ ပြတ်ပြတ် သားသား ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆင်မ ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)နဲ့ တရားဆိုခံထား ရပြီးနောက် နေအိမ် မှာပဲ လာရောက် ဖမ်းဆီး သွားခဲ့ပြီး လက်ရှိ အင်းစိန်ထောင်မှာ အကျဉ်းကျ ခံနေရ […]
ခပ်တည်တည်နဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရှိတာလေးကို မသိမသာလေး ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ အိချောပို
ခပ်တည်တည်နဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရှိတာလေးကို မသိမသာလေး ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ အိချောပို ပရိသတ်ေ တွ ချစ်စနိုးနဲ့ စူစူလို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ သရုပ်ေ ဆာင် မင်းသမီး ချောလေး အိချောပို ကတော့ ပီပြင်ပြီး အပိုလိုမ ရှိကွက်တိကျလွ န်းတဲ့ သရုပ်ဆောင် မှုတွေကြော င့် အနုပညာလမ်းကြောင်း မှာ အောင်မြင် မှုတွေ များစွာနဲ့ ရှေ့ဆက်လျှော က်လှမ်းနေ သူ အနု ပညာရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ဟာ အနုပညာ မျိုးရိုးမ ရှိဘဲ ” အနုပညာ ပျိုးခင်း ” မှတစ်ဆင့် လူရွေးချယ် ခံကာ ဝင်ရောက် လာသူ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ချိန်မှာတော့ ထိပ်တန်းမင်း သမီးလေး တစ်လက် […]
သိန်း (၁၀၀၀)တန်ခြံကြီးကို ဝယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလိုင်းပေါ်တင်ခဲ့လို့ ဝေဖန်တဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးကို ပြန်လည်ချေပလိုက်တဲ့မေပန်းချီ
သိန်း (၁၀၀၀)တန်ခြံကြီးကို ဝယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလိုင်းပေါ်တင်ခဲ့လို့ ဝေဖန်တဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးကို ပြန်လည်ချေပလိုက်တဲ့မေပန်းချီ ပရိသတ် ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ ကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေ အပြင် တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်း တွေနဲ့ ရတနာတွေကို live လွှင့် ရောင်းချ ပေးပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက လည်း ဖြစ်ပါတယ်။မေပန်းချီ ကတော့ သိန်း(၁)ထောင်တန် မြေကွက်ကြီးကို ဝယ်ခဲ့ တာကို လိုင်းပေါ်တင် ခဲ့လို့ဝေဖန်မှု တချို့ထွက်ပေါ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ် တစ်ဦးက အနုပညာသမား ဘဝတူတွေပြေးနေရတဲ့ အချိန်မှာ အမ အလုပ်တွေ အဆင်ပြေ လာတာကို ဝမ်းသာ ပါတယ်။အမကို သဘောကျလို့ Live တိုင်း နီးပါးလဲ ကြည့် ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုခု ဆို ပို့စ်တင်ပြီး ကြွားကြွားနေတာ […]
ရွှေရူပါဦးမွေးနေ့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းမြေးနဲ့ ချစ်ခင်သူတွေ..see more
ရွှေရူပါဦးမွေးနေ့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းမြေးနဲ့ ချစ်ခင်သူတွေ..see more တပ်မတော်ထောက် ခံပွဲတွေနဲ့ အခမ်း အနားတွေမှာ မကြာ ခဏတွေ့ရတဲ့ ရွှေရူပါဦး ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ ကို အာဏာရှင် ဦးနေဝင်း ရဲ့မြေး ကိုအေးနေဝင်း လည်း တက်ရောက် လာတယ် လို့ သိ ရပါ တယ်။ ဇွန်လ ၈ ရက် မှာ ကျရောက် တဲ့ ရွှေရူပါဦးရဲ့ ၂၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲ ကို သူ့ကို ချစ်ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ နဲ့ အတူ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ကျင်းပခဲ့ တာဖြစ်ပြီး အဲဒီ့ ပုံ ရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန်ရက်မှာ မျှဝေခဲ့ တာ ပါ ။ […]